प्राकृतिक प्रकोपबारे बाइबल के भन्छ?
लेखको भाषा अङ्ग्रेजी अजरबैजानी अफ्रिकान्स अमेरिकी साङ्केतिक भाषा अरबी अरबी (लेबनान) अल्बेनियन आइरिस साङ्केतिक भाषा आइसल्याण्डिक आम्हारिक आर्मेनियन इग्बो इटालियन इटालियन साङ्केतिक भाषा इन्डोनिसियन इबान इलोको इसोको ईवी उज्बेक उज्बेक (रोमन) उन्डुबेली (जिम्बावे) उरुन्ड् उर्दू एफिक एस्टोनियन ओरोमो ओसेसियन कन्नडा कम्बोडियन काचिन काम्बा किकाओन्डे किकुयु किन्यारवान्डा किरिवाती किरून्डी किर्गिज किलुबा कुर्दीस कुर्मान्जी (ककेसस्) कुर्दीस कुर्मान्जी (सिरिलिक) कोंगो कोरियन क्याटालान क्यानगोन्डे क्रोएसियन क्वेचा (कुज्को) गा गून ग्रीक चाभाकानो चिचेवा चिटुम्बुका चिटोंगा चिटोंगा (मलावी) चिनियाँ (युनानिज) चिनियाँ (साङ्घाइनिज) चिनियाँ (सिचुवानिज) चिनियाँ क्यान्टोनिज (परम्परागत) चिनियाँ क्यान्टोनिज (सरल) चिनियाँ म्यान्डरिन (परम्परागत) चिनियाँ म्यान्डरिन (सरल) चीन (हाका) चेक जर्जियन जर्मन जापटेक (क्युआटोनी) जापानी जुलू टगालोग टर्किश टाटार टिग्रिन्या टेटन डिली टोंगन डच डेनिश तेलगु त्वी थाई नजेमा नर्वेली नेपाली नोंगा न्युङ्वे पंजाबी पापियामेन्टो (कुरासाओ) पारसी पेन्सिल्भेनिया जर्मन पेरुभियन साङ्केतिक भाषा पोर्चुगिज (पोर्चुगल) पोर्चुगिज (ब्राजिल) पोलिश फन फिजियन फिनिश फेरोई फ्रान्सेली बिकोल बिस्लामा बुल्गेरियन ब्राजिलियन साङ्केतिक भाषा भलेन्सियन भियतनामिज मलावी साङ्केतिक भाषा मले मल्यालम मालागासी म्यानमार युक्रेनियन योरूबा रियुनियन क्रिओल रूसी रूसी साङ्केतिक भाषा रोमानियन लिंगाला लिथुआनियन लुओ लुगान्डा वारे-वारे वेल्श शोना सर्बियन (रोमन) सर्बियन (सिरिलिक) साङ्गो सिंहला सिडामा सिबेम्बा सुन्डा सेत्स्वाना सेपेडी सेबूआनो सेसेल्स क्रिओल स्पेनिश स्पेनिश साङ्केतिक भाषा स्रानानटोंगो स्लोभाक स्लोभेनियन स्वाती स्वाहिली स्विडिस हंगेरियन हिब्रू हिलिगेनोन हौसा
प्राकृतिक प्रकोपहरू परमेश्‍वरले ल्याउनुहुन्‍न, बरु प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेका मानिसहरूलाई देख्दा उहाँलाई दुःख लाग्छ। भविष्यमा परमेश्‍वरको राज्यले प्राकृतिक प्रकोपलगायत हामीले दुःख भोग्नुपर्ने सबै कारणलाई निर्मूल पार्नेछ। त्यतिन्जेल परमेश्‍वरले प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिनुहुन्छ।—२ कोरिन्थी १:३.
प्राकृतिक प्रकोप परमेश्‍वरले दिनुहुने सजाय होइन भनेर हामी किन पक्का हुन सक्छौँ?
के प्राकृतिक प्रकोप हामी अन्तको दिनमा बाँचिरहेका छौँ भन्‍ने कुराको चिन्ह हो?
प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई परमेश्‍वर कसरी मदत गर्नुहुन्छ?
के बाइबल सिद्धान्तहरूले हामीलाई प्राकृतिक प्रकोपको लागि तयार रहन मदत गर्छ?
प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिने बाइबल पदहरू
परमेश्‍वरले दुष्टहरूलाई सजाय दिन प्राकृतिक शक्‍तिहरूको प्रयोग गर्नुभएको विवरण बाइबलमा पाइन्छ। तर ती घटनाहरू र प्राकृतिक प्रकोपबीच धेरै भिन्‍नता छ।
जो कोही पनि प्राकृतिक प्रकोपको सिकार हुन सक्छ। विगतमा परमेश्‍वरले प्राकृतिक शक्‍तिहरू चलाएर सजाय दिनुहुँदा दुष्टहरूलाई मात्र नाश गर्नुभयो। उदाहरणको लागि, पुरातन समयमा सदोम र गमोराको विनाश गर्नुहुँदा परमेश्‍वरले असल मानिस लुत र तिनका दुई छोरीलाई बचाउनुभयो। (उत्पत्ति १९:२९, ३०) परमेश्‍वरले त्यतिखेरका मानिसहरूको हृदय पढ्‌नुभयो र उहाँको नजरमा दुष्ट काम गर्ने मानिसहरूलाई मात्र नाश गर्नुभयो।—उत्पत्ति १८:२३-३२; समुएल १६:७.
प्राकृतिक प्रकोप प्रायजसो पूर्वसूचना नदिई आउँछ। परमेश्‍वरले भने प्राकृतिक शक्‍ति चलाएर दुष्टहरूलाई नाश गर्नुअघि चेतावनी दिनुभएको थियो। परमेश्‍वरले दिनुभएको चेतावनी सुनेर त्यसअनुसार चलेकाहरूले आफ्नो ज्यान जोगाउन सके।—उत्पत्ति ७:१-५; मत्ति २४:३८, ३९.
प्राकृतिक प्रकोपको लागि केही हदसम्म मानिसहरू नै जिम्मेवार छन्‌। कसरी? मानिसहरूले वातावरणको विनाश हुने कामहरू गरेका छन्‌ अनि भूकम्प, बाढी-पहिरोको उच्च जोखिम भएका र मौसम असाध्यै बिग्रने क्षेत्रहरूमा भवनहरू निर्माण गरेका छन्‌। (प्रकाश ११:१८) मानिसहरूको यस्ता गल्तीले गर्दा आएको नराम्रो नतिजाको लागि परमेश्‍वरलाई दोष दिन मिल्दैन।—हितोपदेश १९:३.
हो। “यस युगको आखिरी समय”-मा वा “अन्तको दिनमा” प्रकोपहरू आउनेछ भनेर बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। (मत्ति २४:३; २ तिमोथि ३:१) उदाहरणको लागि, हाम्रो समयबारे भविष्यवाणी गर्दा येसुले यसो भन्‍नुभएको थियो: “ठाउँठाउँमा अनिकाल र भूकम्प हुनेछ।” (मत्ति २४:७) चाँडै परमेश्‍वरले यस पृथ्वीबाट प्राकृतिक प्रकोपलगायत हामीले दुःख भोग्नुपर्ने सबै कारणलाई निर्मूल पार्नुहुनेछ।—प्रकाश २१:३, ४.
परमेश्‍वरले आफ्नो वचन बाइबलमार्फत सान्त्वना दिनुहुन्छ। परमेश्‍वर हाम्रो ख्याल राख्नुहुन्छ र हामीले दुःख भोग्दा उहाँ पनि दुःखी हुनुहुन्छ भनेर बाइबलले हामीलाई आश्‍वासन दिन्छ। (यसैया ६३:९; १ पत्रुस ५:६, ७) कहिल्यै प्राकृतिक प्रकोप नहुने समयबारे परमेश्‍वरले गर्नुभएको प्रतिज्ञाबारे पनि बाइबलमा बताइएको छ।—“ प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई सान्त्वना दिने बाइबल पदहरू” हेर्नुहोस्‌।
परमेश्‍वरले आफ्ना उपासकहरूलाई चलाएर प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई मदत गर्नुहुन्छ। प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई मदत गर्न परमेश्‍वर येसुको अनुकरण गर्ने आफ्ना उपासकहरूलाई चलाउनुहुन्छ। येसुले “मन भाँचिएकाहरूलाई” र “शोकाकुल मानिसहरूलाई” सान्त्वना दिनुहुनेछ भनेर बाइबलमा भविष्यवाणी गरिएको थियो। (यसैया ६१:१, २) परमेश्‍वरका उपासकहरू पनि त्यसै गर्ने प्रयास गर्छन्‌।—युहन्‍ना १३:१५.
प्राकृतिक प्रकोपको मारमा परेकाहरूलाई भौतिक तथा अन्य व्यावहारिक मदत दिन पनि परमेश्‍वर आफ्ना उपासकहरूलाई चलाउनुहुन्छ।—प्रेषित ११:२८-३०; गलाती ६:१०.
पोर्टो रिकोमा यहोवाका साक्षीहरू आँधीको मारमा परेकाहरूलाई मदत दिँदै
के बाइबल सिद्धान्तहरूले प्राकृतिक प्रकोपको लागि तयार रहन मदत गर्छ?
गर्छ। हुनत बाइबल प्रकोपको लागि तयार रहन सिकाउने निर्देशिका होइन तर यसमा पाइने विभिन्‍न सिद्धान्तहरूले प्राकृतिक प्रकोपको लागि तयार रहन मदत गर्छ। उदाहरणको लागि:
प्राकृतिक प्रकोप आउँदा के गर्ने भनेर योजना बनाउनुहोस्‌। बाइबल भन्छ, “चतुर मानिस खतरा आएको देखेर लुक्छ तर अनुभवहीन मानिस भने सरासर अघि बढ्‌छ र दुःख पाउँछ।” (हितोपदेश २२:३) आकस्मिक अवस्थामा के गर्ने भनेर पहिल्यै तयारी गर्नु बुद्धिमानी कदम हो। यसमा झटपट झोला तयार पार्नु र प्रकोप आउँदा परिवारका सबै सदस्य कहाँ भेट्‌ने भनेर अभ्यास गर्नु समावेश छ।
V• धनसम्पत्तिभन्दा जीवन बहुमूल्य छ भन्‍ने कुरा मनमा राख्नुहोस्‌। बाइबल यसो भन्छ, “हामीले यस संसारमा न केही ल्यायौँ न त केही बोकेर लैजान नै सक्छौँ।” (१ तिमोथि ६:७, ८) प्रकोपको बेला आफ्नो ज्यान जोगाउन घर र धनसम्पत्ति छोड्‌नुपर्ने अवस्था आएमा हामी त्यसो गर्न इच्छुक हुनुपर्छ। हाम्रो जीवन धनसम्पत्तिभन्दा बहुमूल्य छ भनेर हामीले सम्झनुपर्छ।—मत्ति ६:२५.
उत्पत्ति १८:२५: “तपाईँले पक्कै पनि धर्मी र दुष्ट दुवैसित एउटै व्यवहार गर्नुहुन्‍न अनि धर्मी मानिसलाई दुष्टसँगसँगै नाश गर्नुहुन्‍न। ... सारा पृथ्वीका न्यायकर्ताले के न्याय गर्नुहुन्‍न होला र?”
अर्थ: परमेश्‍वर सधैँ सही कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैले प्राकृतिक प्रकोपको कारण असल व्यक्‍तिहरूको मृत्यु हुँदा उहाँलाई दोष दिन मिल्दैन।
भजन ४६:१, २: “परमेश्‍वर हाम्रो शरणस्थान र बल हुनुहुन्छ, दुःखको समयमा सजिलै पाइने मदतगार। त्यसैले चाहे पृथ्वी नै हल्लियोस्‌, ... हामी डराउनेछैनौँ।”
अर्थ: जस्तोसुकै अवस्था आइपरे तापनि परमेश्‍वरमा भर पर्दा हामी बलियो हुन सक्छौँ।
यसैया ६३:९: “हरेक चोटि तिनीहरू दुःखमा पर्दा उहाँ पनि दुःखी हुनुभयो।”
अर्थ: परमेश्‍वरले समानुभूति देखाउनुहुन्छ; हामीले दुःख भोग्दा उहाँ पनि दुःखी हुनुहुन्छ।
युहन्‍ना ५:२८, २९: “बेला आउँदै छ, जब चिहानमा हुनेहरू सबैले [येसुको] स्वर सुन्‍नेछन्‌ र बाहिर निस्किआउनेछन्‌।”
अर्थ: हामी मरिसकेका प्रियजनहरूलाई फेरि भेट्‌ने आशा गर्न सक्छौँ किनभने तिनीहरूलाई फेरि जीवित पार्ने शक्‍ति परमेश्‍वरले येसुलाई दिनुहुनेछ।
१ पत्रुस ५:६, ७: “परमेश्‍वरको बलवान्‌ बाहुलीमुनि आफूलाई नम्र बनाओ . . . तिमीहरूले आफ्नो सारा फिक्री उहाँमाथि बिसाओ किनकि उहाँले तिमीहरूको ख्याल राख्नुहुन्छ।”
अर्थ: परमेश्‍वर हाम्रो निकै चासो राख्नुहुन्छ अनि हामीले आफ्नो चिन्ता-फिक्री प्रार्थनामार्फत उहाँलाई बताएको चाहनुहुन्छ।
प्रकाश २१:४: “[परमेश्‍वरले] तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ र मृत्यु हुनेछैन अनि शोक, रुवाइ वा पीडा पनि फेरि कहिल्यै हुनेछैन। पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्‌।”
अर्थ: परमेश्‍वरले प्राकृतिक प्रकोपलगायत हामीले दुःख भोग्नुपर्ने सबै कारणलाई निर्मूल पार्नुहुनेछ।
बाइबल बाइबलसम्बन्धी प्रश्‍नहरूको जवाफ दुःखकष्टको सामना कसरी गर्ने शान्ति र आनन्द
शेयर गर्ने शेयर गर्ने प्राकृतिक प्रकोपबारे बाइबल के भन्छ?
ijwbq लेख १५७